Page9– MySansar
२०७८ साउन २४ गते नेपालका दुई वटा चलेका अनलाइनले राखेको समाचारको स्क्रिनसट हो यो। अनलाइनखबरको समाचार शीर्षक छ- ‘ओली सरकारका अध्यादेश र नियुक्ति संविधानसम्मत’। अनि सेतोपाटीको समाचार शीर्षक छ- ‘संवैधानिक आयोगका नियुक्ति विरूद्धको रिटमा ८ महिनापछि प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफ’। यो समाचारमा यी दुवै अनलाइनले के नचाहिँदो गर्‍यो र सुटुक्क त्यसलाई हटायो- कुरा बुझ्न पर्च हेर्नुस्… Continue reading
मेस्सीको स्वागतमा उर्लिएको भिड भन्दै अमेरिकाको फेस्टिभलको फोटो भाइरल
Posted on August 11, 2021 August 11, 2021 by Salokya
सोसल मिडियामा अहिले एउटा फोटो भाइरल भएको छ। फोटोमा ठूलो भिड देखिन्छ। फोटोसँगै अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ- ‘This isn’t political rally oraconcert butacrowd to welcome Leo Messi in Paris! THIS MAN IS BIGGER THAN ANY SPORT!’ फुटबल स्टार मेस्सीलाई पेरिसमा स्वागत गर्न यो भिड आएको ती भाइरल पोस्टहरुमा दावी छ। यी दावीको… Continue reading
आजदेखि साथी केपी ढुंगाना सम्पादक रहेको उकेरामा #ChhoriMaiyaKhai सिरिज सुरु गरेको छु। केहीले मलाई सोधे पनि आफ्नै माइसंसारमा नगरेर किन अर्कैमा। प्रश्न ठीकै हो। तर यस्तो किसिमको इन्डेप्थ रिपोर्टिङ गर्दा टीम वर्क आवश्यक हुन्छ। पहिला पहिलोपोस्टमा आफै सम्पादक हुँदा सुरु गरेको #WhoKilledNirmala सिरिज पनि धेरै साथीहरुको टीम वर्कका कारण सम्भव भएको थियो। यो त्योभन्दा बिल्कुल… Continue reading
छोरी मान्छेको उमेर नसोध्नू, छोरा मान्छेको तलब नसोध्नू भन्ने उखान नेपालमा छ। उहिलेको कुरा हो यो। अहिले आएर हेर्दा छोराहरु पनि उमेर बताउन मान्दैनन्, अचेल छोरीहरु पनि यो उखान चल्या बेलामा जस्तो घरै बसिरहँदैनन्। बाहिर तलब खाने गरी काम पनि गर्छन्। उनीहरु पनि तलब सार्वजनिक गर्न चाहन्नन्। तर पब्लिक कम्पनीमा जागिर खाएपछि त उखान… Continue reading
२०७२ सालको भूकम्पपछि लामो समयसम्म हामी गयो, गयो, आयो, आयो…आयो गयो, आयो गयोमा अल्झिएका थियौँ। अहिले त्यसरी जमिन नहल्लिए पनि राजनीति हल्लने काम जारी छ। एमाले र माओवादी नामको दुई वटा पार्टी मिलेर नेकपा बनेको थियो। त्यही नेकपा भित्र झगडा हुँदा ठूलै भूकम्प गयो। सर्वोच्च अदालतले पार्टी नै छुट्याइदियो। त्यसपछि अझसम्म परकम्पनहरु आउने क्रम जारी… Continue reading
‘१० कित्ते’ भनेको के हो भनेर नबुझेको भए बुझ्नुस्- यो मूलधारे मिडियाका पत्रकारहरुले युट्युबरलाई हेपेर ‘युट्युबे’ भने जस्तै शब्द हो। धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सयौँ, हजारौँ कित्ताको कारोबार गर्नेहरु आइपिओ भर्नेहरु र थोरै संख्यामा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेहरुलाई हेपेर ‘१० कित्ते’ भन्ने गर्छन्। किन त्यसो भन्या त? कुरो यसो हो के, कुनै कम्पनीको प्राथमिक शेयर निश्कासन… Continue reading
शुक्रबार राति एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। गणेश बूढाले फेसबुकमा अपलोड गरेको यो भिडियो अजिबको छ। यसमा पूर्व युवराज पारस शाह ‘जान्नँ, जान्नँ..’ भन्दै गरेका सुनिन्छन्। आमाबाबुले कतै जाउँ भन्दा सानो बच्चाले जिद्दी गरेको जस्तो सुनिन्छ आवाज, ‘जान्नँ..जान्नँ..जान्नँ भनेको !’ प्रहरी भने तान्दै गरेका देखिन्छन्।
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले १२ साउन २०७८ मंगलबारको अङ्कमा ‘किशोरकिशोरीका लागि ६० लाख फाइजर खोप किन्ने सम्झौता’ शीर्षकमा चार कोलमको समाचार पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। समाचारमा ‘सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै ६० लाख खोप खरिद गर्न लागेको र अमेरिकाको फाइजर एन्ड बायोटेक (वास्तविक नाम फाइजर-बायोएनटेक) कम्पनीले उत्पादन गरेको… Continue reading
मंगलबार एकाएक सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय निकै चर्चामा आयो – विजय शाहीको मृत्यु। उनको मृत्यु भएको दावी गर्दै फोटोसहितको पोस्ट भाइरल भयो। सबैभन्दा पहिला युट्युबर भाग्य न्यौपानेले अद्‍भूत स्मरण शक्ति रहेको दावी गरेर चर्चामा ल्याएका उनी पछि राष्ट्रिय टेलिभिजनमा ऋषि धमलाको शोमा सम्म छाए। कर्णाली सरकारले पुरस्कारको घोषणा गर्‍यो। उनका दावीहरुको परीक्षणसम्म पनि नगरी उनलाई… Continue reading
युट्युबसहितको सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चाको विषय बनेको थियो सुजिता भण्डारी प्रकरण। हराएपछि किडन्याप भएकोदेखि शव भेटिएपछिसम्म पनि युट्युबरहरुले अनेक कहानी बुने। रेप एन्ड मर्डर भएको ठहर सामाजिक सञ्जालबाटै गरियो। त्यही भन्दै चर्का नाराबाजी गरेर प्रदर्शन गरियो। शव पोस्टमार्टम गर्न लानसमेत अवरोध गरियो। हुँदाहुँदा कर्फ्युसम्म लगाउनु पर्ने स्थिति आयो। तर प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको… Continue reading
२०७५ साउन २१ : भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित जंगलमा २२ वर्षका गोपाल तामाङ र २३ वर्षका अजय तामाङको गोली लागेर मृत्यु भयो। प्रहरीले दोहोरो झडपमा उनीहरु मारिएको बतायो। तर घटनास्थल हेर्दा नै त्यो दोहोरो झडप जस्तो नदेखिएको, फेक इन्काउन्टर रहेको चर्चा उतिबेलै व्यापक थियो। (दुई वर्षपछि) २०७७ असोज ३० : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विशेषज्ञहरु सम्मिलित छानबिन समिति… Continue reading